Android App: WhatsApp မှာ ဓာတ်ပုံတွေ Fake လုပ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို စချင်တယ်ဆိုရင်
WhatsApp အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ App နှစ်ခုကို sharing လုပ်ချင်ပါတယ်။ အဲဒီနှစ်ခုကတော့ Z-Photo Fake for WhatsApp နှင့် magiapp တို့ဖြစ်ပြီး Google Play Store မှာ အလကား ရယူနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီ app တွေရဲ့ အသုံးဝင်ပုံကတော့ သင်ရဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကို ဓာတ်ပုံတွေ fake လုပ်ပြီး ပို့ချင်တဲ့အခါမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ WhatsApp ရဲ့ chat box မှာ sharing လုပ်လိုက်တဲ့အခါ Thumbnail (ပုံအသေးအရွယ်) အနေဖြင့် ပြတာက တစ်ပုံ၊ တကယ်တမ်း အဲဒီပုံကို size အကြီးအနေနဲ့ ကြည့်လိုက်တော့ ဖြစ်နေတာက တစ်ပုံ အဲဒီလို fake လုပ်ဖို့ သုံးနိုင်ပါတယ်။ အရှင်းဆုံး ဥပမာ ထပ်ပြီးပေးရရင် အမိုက်စားကောင်မလေးတစ်ပုံ ပို့လိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပုံကြီးကို view လုပ်လိုက်တဲ့အခါ ချီးပုံကြီးဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့ :D
Invitation Letter of Bangladesh Buddhist Associations, UK
Dear Venerable Bhantes, Sayadaws and Devotees of the temples
We are writing you on behalf of Bangladesh Buddhist Associations, UK. As you may have heard about the recent brutal arson attacks on Buddhist temples, Buddhist villages and Hindu temples across Chittagong, we are holdingademonstration at the Parliament Square and foreign office to show our solidarity with the victims. The attacks were too much to bear for the minorities and buddhist followers. If we do not have sympathy on Buddhist minorities in Bangladesh, the minorities’ religions (Buddhism or Hinduism) will soon be over from the ancient Buddhist lands. History tells us that the faiths of peaceful religion i.e. Buddhism had been destroyed by invaders and killed them if not converted into their religions. The evidence suggests the same history is repeating again and will continue till our existence and our Buddhist faiths come to an end in the world. The peaceful existence of Buddhists and other religious minorities i…
Facebook News Feed မှာ မမြင်လိုသော ပို့စ်များအား ဖယ်ရှားခြင်း
Facebook မှာ up to date သတင်းတွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေ ကြည့်ရဖတ်ရတာ ကြိုက်နှစ်သက်ပေမဲ့ အရည်မရ အဖတ်မရတွေကိုလည်း မမြင်ချင်ဘဲ မြင်နေရတဲ့ အခါမျိုးလည်း ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အရည်မရ အဖတ်မရ ပို့စ်တွေတင်တတ်တဲ့ ကျေးဇူးရှင်လေးတွေကို အားနာလို့ သူငယ်ချင်းအဖြစ်ကနေလဲ Unfriend/Block မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင် ဒီနည်းလေးအတိုင်း လုပ်သာထားလိုက်တော့။
ဒီပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း News Feed မှာ ကိုယ်မမြင်ချင်တဲ့ သူရဲ့ page ကိုသွားပြီး Friends button ကိုနှိပ် Shows in News Feed ကို uncheck လုပ်ပေးလိုက်။ ဒါဆိုရင် အဲဒီကျေးဇူးရှင်ရဲ့ အရည်မရ အဖတ်မရ ပို့စ်တွေ သင်ရဲ့ News Feed မှာ တွေ့ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ အာရုံနောက်ခြင်း ကင်းဝေးကြပါစေ။
Android App: WhatsApp မှာ ဓာတ်ပုံတွေ Fake လုပ်ပြီး...
Invitation Letter of Bangladesh Buddhist Associati...
Facebook News Feed မှာ မမြင်လိုသော ပို့စ်များအား ဖ...